Paul's Letter to the Galatians – 2kalluunka
Home / Kitaabka Quduuska ah / Waraaqaha / Paul's Letter to the Galatians
1:1 Paul, Rasuul, ma dadka oo aan iyada nin, laakiinse ku yimid Ciise Masiix, iyo Ilaaha Aabbaha ah, kuwii dhintay ka soo isaga ka sara kiciyey,
1:2 iyo walaalihiis oo dhammu waxay ila yihiin: in kiniisadihii Galatiya.
1:3 Grace iyo nabad ka timaada Ilaaha Aabbaha ah, iyo Rabbigeenna Ciise Masiix,
1:4 Isagu nafsaddiisuu u bixiyey ka wakiil ah dembiyadeenna, si uu inooga this da'da sharka leh la joogo, sida ay tahay doonista Ilaah Aabbeheen.
1:5 isaga u tahay ammaanta leh weligiis iyo weligiis. Aamiin.
1:6 Waxaan la yaabanahay in aad sidaas si dhakhso ah loo wareejiyay, iman kan idiin yeedhay nimcada Masiixa, in ka badan inaan injiilka kale.
1:7 Waayo, waxaa jira mid kale ma jiro, marka laga reebo in ay jiraan dadka qaar ka mid ah kuwaas oo aad rabshin oo doonaya in ay u rogto Injiilka Masiix.
1:8 Laakiin haddii qof, xataa innaga qudheennu ama Angel ka Jannada, waxay ahaayeen ku wacdiyo kuwiinna injiil kale oo aan ahayn mid ka mid ah in aan idinku wacdiyey, ha inkaarnaado.
1:9 Sida aan ku sheegay in ka hor inta, sidaas oo kalena haatan mar kale waxaan idinku leeyahay: Haddii qof ayaa ku wacdiyey injiilka a in aad, kale oo aan ahayn wixii aad heshay, ha inkaarnaado.
1:10 Waayo, waxaan haatan ku waaninayay nin, ama Ilaah? Or, anigu doonaya inay dadka ka farxiyo? Haddii aan weli dadka ka sii farxinayo, ka dibna waxaan ku ma uu doonaynin ah addoonkii Ciise Masiix noqon.
1:11 Waayo, waxaan jeclaan lahaa inaad fahamto, oo walaalo ah, in Injiil kaas oo lagu wacdiyey by aan xagga dadka.
1:12 Oo anigu kama aan helin xagga dadka, umana aan u bartaan, marka laga reebo iyada oo waxyi Ciise Masiix.
1:13 Waayo, waxaad maqasheen dhaqanka hore gudahood Yuhuudda: in, sii, Baan silcin jiray kaniisada Ilaah oo la dirireen reer Her.
1:14 Markaasaa ayaan kaga hor maray diinta Yuhuudda badan oo asaaggay ah oo aan ka mid nooc gaar ah, isagoo xaqiijiyey in ay noqon badan ee qiirada xagga dhaqanka awowayaashay.
1:15 Laakiin, marka isagii way ka farxisay kuwa, uurkii hooyadiis, ayaa gooni iga dhigay, iyo kan iigu yeedhay nimcadiisa,
1:16 inuu u muujiyo inuu Wiilkiisa iga gudahood, si aan isaga aaso oo laga yaabo quruumaha dhexdooda, Waxaan soo socda ma ay doondoonaan oggolaanshaha jidh iyo dhiig.
1:17 Ma waxaan u socdaa inaan Yeruusaalem, kuwii hortay rasuullada ahaa. Halkii, Waxaan aaday dalka Carabta, oo soo socota waxaan ku soo noqday Dimishaq.
1:18 Markaas, saddex sano ka dib, Yeruusaalem aaday inaan Keeyfas; oo anna waxaan isaga la joogay shan iyo toban maalmood.
1:19 Laakiin waxaan arkay mid ka mid ahaa Rasuullada kale, James marka laga reebo, oo ah Sayidka walaalkiis ah.
1:20 Hadda waxa Waxaan idinku wargalinaynaa in aad: bal eeg, Ilaah hortiisa, Anigu waxba ma aan been.
1:21 Next, Waxaan galay dalalka Suuriya iyo Kilikiya.
1:22 Laakiin waxaan laygama weji garanayn kiniisadaha Yahuudiya, oo Masiixa ku jiray.
1:23 Waayo, waxay ku maqleen oo keliya in: "Waxa uu, kuwaas oo hore na silciyey, hadda evangelizes rumaysadkii uu mar la diriray. "
1:24 Oo Ilaah bay u ammaaneen.
2:1 Next, afar iyo toban sannadood ka dib, Waan ku soo mar kale Yeruusaalem aaday, qaadashada la ii Barnabas iyo Titus.
2:2 Ayaan u tegey sida ay soo dajinta, oo anna iyagii waan la dooday oo ku saabsan Injiilka aan Yuhuudda ahayn dhexdooda ku wacdiyaya, laakiin kuwa iska kuwaas oo iska noqon wax, waaba intaasoo waxaan ku ordo, ama ay u ordaan, waxtarla'aan.
2:3 Laakiin xataa Tiitos, oo ila socday, inkastoo uu ahaa qof aan Ilaah aaminin, lama qasbin in la gudo,
2:4 laakiin oo kaliya sababtoo ah walaalo been ah, kuwaas oo keenay in aan garanayn. Waxay si qarsoodi ah u galeen inay dalka soo basaasaan on our xorriyad, oo aynu Ciise Masiix ku haysanno, sidaa darteed ayay na la yareeyo oo laga yaabo addoonsan.
2:5 Ma aanan iyaga ka dambeeya, xataa saacad, si Xaq ah ee Injiilka idinla sii joogi doono,
2:6 oo ka mid ah kuwa ka fog oo la iska noqon wax. (Wax kasta oo ay kari lahayn mar, waxaa loola jeedaa waxba ii. Eebe kama raalli noqdo sumcadda of nin.) Iyo kuwa la sheegay in uu yahay wax aan waxba ahayn in ay ii soo bandhigi lahaa.
2:7 Laakiin waxay ahayd in lid ku ah, tan iyo markii ay arkeen in Injiil si buuryoqabka ah waxaa la ii dhiibay, sida Injiil u gudo loo sii dhiibtay Butros.
2:8 Waayo, kii la shaqeeyo Rasuulnimada u gudo in Peter, ayaa sidoo kale ka shaqeeya oo igu taal oo aan Yuhuudda ahayn dhexdooda.
2:9 Oo sidaas daraaddeed, markay qiray nimcada lay siiyey, Yacquub iyo Keeyfas iyo Yooxanaa, kuwaas oo u muuqday sida tiirar, i siiyey iyo Barnabas oo wehelnimada gacanta midig, si aan dadka aan Yuhuudda ahayn inuu raaco, Markay tageen inay soo guday ah,
2:10 weydiinaya kaliya si aynu xusuusanno masaakiinta, taas oo ahayd wax aad u in aan sidoo kale ahaa solicitous inay sameeyaan.
2:11 Laakiinse Keeyfas kolkuu Antiyokh yimid, Waxaan isaga ka gees ah u istaagay inuu wejigiisa, maxaa yeelay, wuxuu ahaa oo tabar gaba.
2:12 Waayo, intaan kuwa qaarkood yimid James ka, wuuna cunay la aan Yuhuudda ahayn. Laakiin markii ay soo gaareen, uu gooni seefqaad ah oo ka soocmay, ka baqaya kuwa kuwii gudnaa ayaa la.
2:13 Oo Yuhuuddii kale oggolaadeen uu istusid, si ay xataa Barnabas ayaa la hoggaamiyaana way wada galay falseness in.
2:14 Laakiin markii aan arkay in ay si sax ah socda, by runta ee Injiilka, Waxaan is-idhi in Keeyfas hore ee qof kasta: "Haddii aad, inta aad Yuhuudi ah, ku nool yihiin sida dadka aan Yuhuudda ahayn oo aan Yuhuudda, sida ay tahay in aad qasbaysaa dadka aan Yuhuudda inay dhawraan caadooyinka Yuhuudda?"
2:15 By dabiiciga ah, aan Yuhuudda, oo ma aha kuwa aan Yuhuudda ahayn, dembilayaal.
2:16 Oo waxaynu og nahay in nin xaq ku noqon shuqullada sharciga, laakiin kaliya ay iimaanka Ciise Masiix. Oo sidaas daraaddeed waxaan rumaysanahay in Ciise Masiix, si aan xaq ku noqdaan aawadeed by rumaysadka Masiixa, oo ayan ahayn shuqullada sharciga. Waayo, ninna xaq ku noqon doonaan, shuqullada sharciga.
2:17 Laakiin haddii, halka doonaya inay Masiix xaq ku, annaga qudhayadu waxaannu ayaa sidoo kale ogaaday in dembilayaal, markaas midiidinka dembiga Masiixa noqon lahaa? Yaanay noqon!
2:18 Waayo, haddii aan dib u dhiska waxyaalaha waan baabbi'iyey, Aniga qudhaydu waxaan ku adkayn sida prevaricator a.
2:19 Waayo, sharcigu wuxuu dhex, Waxaan noqday dhintay xagga sharciga, si aan u noolaado, Waayo, Ilaah. Waxaan la qodbay iskutallaabta Masiixa la.
2:20 waxaan ku noolahay; weli hadda, ma aha waxaan, laakiinse sida runta Masiixa, kuwaas oo igu dhex nool. Oo in kastoo aan ku noolahay haatan jidhka ku, Waxaan ku noolahay rumaysadka xagga Wiilka Ilaah, kan i jeclaaday oo kan qudhiisu waa ii dhiibay; waayo,.
2:21 Ma diidi nimcada Ilaah. Waayo, haddii caddaalad sharciga laga helo, Masiix in aan micne lahayn ku dhintay.
3:1 Garaadlaawayaasha reer Galatiyow, ayaa si aad kaabayaasha dhaqaale in aad runta addeecin lahaa, inkastoo Ciise Masiix ayaa lagu soo bandhigay indhihiinna hortooda, oo idinka mid ah oo iskutallaabta lagu qodbay?
3:2 Waxaan jeclaan lahaa in la ogaado oo kaliya waxa aad ka: Ma waxaad ku hesheen Ruuxa ku noqon shuqullada sharciga, mise maqlidda rumaysadka?
3:3 Ma waxaad tahay doqon in, in kastoo aad bilaabay Ruuxa, aad hadda dhamaan doono hilibka la?
3:4 Ma waxaad la il daran wax badan sabab la'aan? Haddii ay sidaas tahay, ka dibna waxa ay waxtarla'aan.
3:5 Sidaa darteed, wuxuu sameeyo kan Ruuxa u qaybisay in aad, iyo kuwa xoogga leh idinku dhex shaqeeya, fal by shuqullada sharciga, mise maqlidda rumaysadka?
3:6 Waa sida la qoray: "Ibraahimna Ilaah buu rumaystay, oo taasna waxaa lagu sharfay in ay isaga ku yidhi caddaaladda. "
3:7 Sidaa darteed, ogahay in kuwa rumaysadka, kuwanu waa wiilashii Ibraahim.
3:8 Sayidka Kitaabka, u arkay in Ilaah xaq kaga dhigi doono dadka aan Yuhuudda ahayn ku noqdo rumaysadka ee, sheegeen in Abraham: "Quruumihii oo dhammu ku barakoobi doonaan aad ee."
3:9 Oo sidaas daraaddeed, kuwa rumaysadka ku barakoobi doonaan Ibraahimkii rumaystay.
3:10 In alla intii shuqullada sharciga inkaar bay ku hoos jira. Waayo, waxaa la qoray: "Inkaaran yahay ku kasta oo aan ku sii soco waxyaalihii in la qoray kitaabkii sharciga oo dhan, si ay u yeeshaan. "
3:11 Markaasay, tan iyo sharciga ninna xaq yahay, isagoo Ilaah la, tani waa cad: "Waayo, Ninkii xaq ah oo ku nool yahay iimaanka."
3:12 Laakiin sharciga kama iman rumaysadka; halkii, "Kii sameeya waxyaalahaas ku noolaan doono iyada."
3:13 Masiix wuxuu inaga furtay inkaartii sharciga, tan iyo markii uu noqday inkaar inoo. Waayo, waxaa qoran: "Inkaaran yahay cid kasta oo ka soo geed lulataa."
3:14 Tani waxay ahayd si ay in barakadii Ibraahim gaari laga yaabaa in dadka aan Yuhuudda ahayn xagga Ciise Masiix, si inaynu ballankii Ruuxa ku helno rumaysad.
3:15 Brothers (Laakiin waxaan la hadlayaa sida nin), haddii nin axdiga ayaa la xaqiijiyay, ninna ma uu diido lahaa ama ku dari u.
3:16 ballamada loo sameeyey Ibraahim iyo farcankiisa. Wuxuu ma uu odhan,, "Iyo in ay ahaayeen farcankii,"Sida haddii ay u badan, laakiin halkii ay, sida haddii mid ka mid, ayuu yiri, "Iyo in farcankaaga,"Waa Ciise Masiix kii.
3:17 Laakiin waxaan leeyahay: axdiga xaqiijiyay by Ilaah, taas oo, ka dib markii afar boqol iyo soddon sannadood noqday Sharciga ah, ma burin, si ay u ballanka madhan.
3:18 Waayo, haddii dhaxalka laga helo sharciga, markaas ma aha mar dambe ballankii. Laakiin Ilaah wuxuu iyada siinay Ibraahim ballan ku.
3:19 maxaad, ka dibna, waxaa jiray sharciga ah? Waxaa la aasaasay xadgudubyo aawadood, ilaa farcankii imaan lahaa, kan uu sameeyey balan qaadka, tassi Malaa'igta iyada oo dhexdhexaadiye gacantiis.
3:20 Dhexdhexaadiye ma aha mid, Laakiinse Ilaah waa mid ka mid.
3:21 Sidaas daraaddeed, ahaa lid ku ah sharciga si ballamadii Ilaah? Yaanay noqon! Waayo, haddii sharci la siiyey, taas oo ahayd karo inuu soo nooleeyo siin, si dhab ah caddaalad noqon lahaa sharciga.
3:22 Laakiin Qorniinka ayaa ku lifaaqan wax walba dembiguu ku hoos, si loo ballanqaaday, rumaysadka Ciise Masiix, waxaa laga yaabaa in la siiyo kuwa rumeeyey.
3:23 Laakiin ka hor inta iimaanka gaaray, naloo sii raagayaan by lagu lifaaqay sharciga ku hoos, ilaa rumaysadka wixii u soo muuqan doontaa.
3:24 Oo sidaas daraaddeed sharcigu wuxuu ahaa masuulka aan Masiixa, si inaynu xaq ku noqonno rumaysadka.
3:25 Laakiinse haatan rumaysadka ayaa gaaray, aynaan mar dambe ka yar tahay ilmaha masuulka ka ah.
3:26 Waayo, kulligiin waxaad tihiin wiilashii Ilaah, xagga rumaysadka oo ku jirta Ciise Masiix.
3:27 Waayo, sida badan oo idinka mid ah ayaa lagu baabtiisay Masiix ku noqdaan oo Masiix wax dhar.
3:28 Ma jiro Yuhuud ama Gariig; ma jiro addoon ama aydaan free; ma jiro lab ama dhaddig. Waayo, waxaad tahay oo dhan mid ka mid ah Ciise Masiix.
3:29 Oo haddii aad tihiin kuwa Masiix, ka dibna aad tahay farcankii Ibraahim, dhaxalka leh sida ballanku ah.
4:1 Laakiin waxaan idinku leeyahay,, inta lagu jiro waqtiga walad yahay ilmo, uu jiro kala duwan oo ka addoon, inkastoo uu yahay milkiilaha walba.
4:2 Waayo, isagu wuxuu ka hooseeyaa kuwa ilaaliya iyo xanaaneeyayaasha, ilaa wakhtiga kaas oo la dejiyay aabbihiis ka.
4:3 Sidaas oo kale waxaan, markaynu carruur ahayn, ayaa usakhirey u saamayn dunida.
4:4 Laakiinse markii wakhtigii buuxsamay gaaray, Ilaah wuxuu soo diray Wiilkiisa, soo sameeyey qof dumar ah oo, sameeyay sharciga ku hoos,
4:5 si uu furto kuwii sharciga ku hoos jiray, si inuu carruurtiis inaga dhigo wiilashooda.
4:6 Sidaa darteed, maxaa yeelay, idinku waxaad tihiin wiilashii, Ilaah ayaa Ruuxa Wiilkiisa u soo diray qalbiyadeenna, iyagoo qaylinaya: "Aabbow, Aabbaha. "
4:7 Oo sidaas oo kalena haatan isagu ma aha addoon, laakiin wiil. Laakiin haddii uu wiil yahay, ka dibna waxa uu sidoo kale waa kii dhaxalka ah, Ilaah.
4:8 laakiin markaas, dhab ahaan, halka jaahil ka ah Ilaah, waxaad u adeegi jireen kuwa, ay dabiicadda, ma ilaahyo.
4:9 Laakiin hadda, iyo tan iyo markaad Ilaah yaqaan, ama halkii, tan iyo aad ayaa loo yaqaan by Ilaah: sida aad mar kale u celin kartaa, si ay saamayn daciif ah oo xaalufay, kuwa aad jeceshihiin inaad mar kale u adeegtaan?
4:10 Waxaad u adeegtaan maalmood ah, iyo bilaha, iyo jeer, oo sano.
4:11 Waxaan ka baqayaa, waayo,, waaba intaasoo aan laga yaabaa hawshooday si been ah oo idinka mid ah.
4:12 Brothers, Waxaan kaa baryayaa inaad. Inaad noqotaan sida aan ahay. Waayo, waxaan, aad, waxaan ahay sidaada oo kale. Adigu kuma aadan i dhaawacay.
4:13 Laakiinse idinku waad taqaaniin in, in itaaldarrada jidhka, Waxaan wacdiyey Injiilka inaad wakhti dheer ah, iyo in tijaabooyin aad ku sugan tahay jidhkayga.
4:14 Waxaad ma aydnaan quudhsan, ama I beeniyaan. Laakiin halkii, waxaad ii aqbalay sida Angel Ilaah, xataa sida Ciise Masiix.
4:15 Sidaa darteed, halkaas oo waa farxad? Waayo, waxaan kuu soo bixin si aad marag in, haddii la sameyn karo, aad bixin lahaydeen indhihiinna aad daacadnimola'aan oo waxaan iyaga ku siin lahaa i.
4:16 Sidaas daraaddeed, ayaan cadowgaaga noqday runta aan idiin sheego?
4:17 Waxay aysan si fiican aad dayataan. Oo iyana waxay diyaar u tahay inaad ka horjoogsanaya in ay yihiin, si aad iyaga u shabahaan.
4:18 Laakiin dayataan waxa wanaagsan, had iyo jeer in hab wanaagsan, iyo ma aha oo kaliya markii aan idinla joogo.
4:19 wiilal yar My, Waxaan ahay dhalmada in aad mar kale, ilaa Masiix idinku dhex abuurmo.
4:20 Oo iyadoo raalli ku noqon lahaa aan idinla joogo, haddeer. Laakiin codkayga waan bedeli lahaa: waayo, waan ka xishoonayaa oo idinka mid ah.
4:21 Iisheeg, Kuwa doonaya inay sharciga ku hoos, miyaydnaan akhriyin sharciga?
4:22 Waayo, waxaa qoran in Ibraahim laba wiil lahaa: kii uu naagta addoon, iyo kii uu naagta xorta ah.
4:23 Oo isna wuxuu ahaa addoonkii ku dhashay sida jidhka. Laakiin kii naagta xorta ah waxa uu ku dhashay by ballankii.
4:24 waxyaalahan laga sheegay waa iyada oo loo marayo waa masaal. Waayo, kuwaas oo ka wakiil ah laba Axdiga. Waxa hubaal ah in mid ka mid ah, Buur Siinay, dhasho ilaa dhibkeedii, taasu waa Haagaar.
4:25 Waayo, Siinay waa buur ee Arabia, kaas oo la xiriira Yeruusaalem wakhtiga la joogo, oo u adeegto iyadoo wadata wiilasheedii.
4:26 Laakiin in Yeruusaalem oo kor ku xusan yahay waa lacag la'aan; isla waa hooyo.
4:27 Waayo, waxaa la qoray: "farxa, mid madhalays O, in kastoo aadan uuraystaan. Qarxaan bax oo mashxarad baxay, in kastoo aadan dhalaan. Waayo, qaar badan waa cidlowday carruurteedu, xitaa ka badan tii tan ninka leh. "
4:28 Hadda waxaan, oo walaalo ah, sida Isaac, waa wiilashii yabooha.
4:29 Laakiin sida ka dibna, kii waxa uu ku dhashay sida jidhka wuxuu silciyey kii waxa uu ku dhashay sida Ruuxa u socdaa, sidaas oo kale ayay hadda yahay.
4:30 Oo maxay Kitaabka odhan? "Eri anoo addoonkaaga ah naagta iyo Wiilkeeda. Waayo, ina Addoon kama haweenka la dhaxli la ina qof dumar ah oo lacag la'aan ah. "
4:31 Oo sidaas daraaddeed, oo walaalo ah, ma waxaan waa wiilashii naagtii addoonkii, laakiin halkii ay naagta xorta ah. Oo kanu waa xoriyadda Masiixu inagu xoreeyey.
5:1 adkaysanno, hana noqon diyaar u ah inay mar kale lagu qabtay by harqoodka addoonnimada.
5:2 Bal eeg, Waxaan, Paul, idinku leeyahay, in haddii lagu gudo, Masiix wuxuu noqon doonaa lacagta lahayn in aad.
5:3 Waayo, waxaa haddana waxaan ka marag furaa, ku saabsan nin waluba wuxuu gudeen, in uu waxa ku waajib ah in ay u dhaqmaan sida sharcigu leeyahay oo dhan.
5:4 Waxaad la madhin Masiixa, Kuwa la sharciga xaq ku. Nimcadiina waad ka dhacay.
5:5 Waayo, ruuxa, rumaysad buu ku, waxaan sugnaa rajada caddaaladda.
5:6 Waayo, Ciise Masiix, mana gudan ama mid buuryoqab ahaaday badan wax, laakiin rumaysadka oo keliya oo ka shaqeeya iyada oo samafal.
5:7 si wanaagsan baad u ordi. Sidaas waxa aad carqalad, in aad runta addeecin lahaa?
5:8 Noocan ah saameyn kuma jiro isaga ka Kan idiin yeedhaa.
5:9 In yar oo khamiir kharribanta mass oo dhan.
5:10 Waan idin hubaa in, Rabbiga ku, in aad waxba nooca aqbali doono. Si kastaba ha ahaatee, kii dhibsadayoo inaad xukunka uu qaadan doono, ku alla kii uu waxaa laga yaabaa in.
5:11 Oo aniga, oo walaalo ah, haddii aan anigu weli gudniinta wax ku wacdiyo, maxaa weli la il daran cadaadis? Waayo, markaas fadeexadii ee Laanqeyrta la lahaa madhan.
5:12 Oo weliba waxaan jeclaan lahaa in kuwa idin dhibin loo kala jeexjeexi lahaa.
5:13 Waayo, waxaad, oo walaalo ah, ayaa loo yeedhay xorriyad. Kaliya waa in aad ma xorriyad ka dhigi galay munaasabadda ah oo jidhka, laakiin halkii ay, adeegi mid kale oo iyada oo samafal Ruuxa.
5:14 Waayo, sharciga oo dhan waa buuxsamay by hadal keliya: "Waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada."
5:15 Laakiin haddaad isqaniintaan oo iscuntaan kale, taxaddar in aad ma aydaan wada baabbi'in by midba midka kale!
5:16 Sidaas daraaddeed, Waxaan idinku leeyahay: Ruux ku socon, oo aadan dhammaystiri doonaa damacyada jidhka.
5:17 Waayo, jidhka dooni ka dhanka ah ruuxa, iyo ruuxa ka gees jidhka,. Oo tan iyo kuwanu waa mid kale oo ka dhan ah, waxaa laga yaabaa in aadan sameyn wax kasta oo aad rabto in aad.
5:18 Laakiin haddii aad hoggaamiyo Ruuxa, aad, sharciga kuma hoos.
5:19 Shuqullada jidhku waa muuqdaan; ay yihiin: sinada, damacoodu, khaniisnimada, damacbadnaan,
5:20 qaadasho ah Sanamyada, isticmaalka daroogada, cadaawad, contentiousness, masayrka, cadhadii, Dirirta, bidcinimo, qaybahoodii,
5:21 hinaaso, dil, inebriation, cuslaan, iyo wax la mid ah. About waxyaalahaas, Waxaan sii wadi inuu wax ku wacdiyo in aad, sida aan idinku wacdiyey: in kuwa u dhaqmaan hab this ma heli doonaan boqortooyada Ilaah.
5:22 Laakiin midhaha Ruuxu waa jacayl, farxad, nabadda, samir, naxariis, wanaaggii, samirkiisa,
5:23 qalbiqaboobaan, iimaanka, Furuujtooda, dheerow, isdhawra. Ma jiro sharci ka gees ah waxyaalaha caynkaas ah.
5:24 Waayo, kuwa Masiix waxay iskutallaabta ku qodbeen jidhka ay, oo ay la socdaan adeegyada iyo damacyadiisa.
5:25 Haddii aynu Ruuxa ku nool ah, Sidoo kale waa in aynu Ruuxa ku socda.
5:26 Ha noo noqon doonaya ammaan madhan, xanaajin kale, isxaasidin kale.
6:1 Markaasay, oo walaalo ah, haddii nin ayaa haleel by dembi, waa in aad kuwa xagga ruuxa qof wax baro sida la ruuxa naxariisto, fiirsaneysa in aad naftiina laga yaabaa in laguu jirrabin.
6:2 Kaxayseen midkood midka kale culaabta, iyo si aad u fulin doonaa sharciga Masiixa.
6:3 Waayo, haddii qof isku arkaa inuu yahay wax, in kastoo uu laga yaabaa in aan waxba, wuu iskhiyaaneeyaa.
6:4 Sidaas daraaddeed ha nin walbana shuqulkiisa tijaabiyo. Oo sidan, buu u yeelan doonaa ammaanta qudhiisu kaliya, oo aan in kale.
6:5 Waayo, mid kastaaba waa inuu culaabtiisa qaadan doonaa.
6:6 Oo ha kuwaas oo la baray Ereyguna wuxuu kala hadli isaga la kaasoo u barayay isaga u, hab kasta oo wanaagsan.
6:7 Ha dooran inuu iddin baadiyeeyo warwareegaan. Ilaah ma aha in la jees jeesi.
6:8 Waayo, wax alla wixii nin ayaa lagu beeray doona, in sidoo kale uu soo goosan doonaan. Waayo, ku alla kii beera ee jidhkiisa, ka jidhka ayuu goosan doonaa qudhun. Laakiin ku alla kii beera Ruuxa, Ruuxa uu soo goosan doonaan nolosha weligeed ah.
6:9 Oo sidaas daraaddeed, ha na aan la Nusqaaminin in wanaagna wuu fali jiray. Waayo, wakhtigiisa, waxaan aan soo goosan doonaan guul darreysato.
6:10 Sidaa darteed, halka aan haysan waqti, waa in aan shuqullo wanaagsan oo xagga qof kasta samayn, iyo in ka badan oo dhan xagga kuwa reerka iimaanka.
6:11 Tixgeli nooca warqado aan idiin soo qoray gacantayda ku qoraya.
6:12 Waayo, sida badan oo idinka mid ah waxay jecelyihiin in ay ka farxiyaan jidhka ku, waxay qasabtay in la gudo, laakiin kaliya oo sidaas daraaddeed ma ay u oggolaan inuu caddibaadda iskutallaabta Masiixa.
6:13 Oo weliba, oo innaba iyaga qudhooduba samayn, kuwa gudan, sharciga dhawra. Halkii, ay doonayaan in laydin gudo, si ay u faano jidhkiinna.
6:14 Laakiin ha iga fogaato ka ammaan, marka laga reebo in iskutallaabta Rabbigeenna Ciise Masiix, kan dunida waxaa lagu qodbay ii, oo anna aan dunida ugu.
6:15 Waayo, Ciise Masiix, mana gudan ama mid buuryoqab ahaaday sinaba, laakiin halkii waxaa jiro waa abuur cusub.
6:16 Markaasaa ruuxii raaca xeerkan: nabad iyo naxariis korkooda ku waxaa laga yaabaa in, iyo reer binu Israa'iil Ilaah.
6:17 Ku saabsan axwaal kale, ninna yaanu i dhibin. Waayo, waxaan qaadi stigmata Rabbi Ciise ee jidhkayga.
6:18 Nimcada Rabbigeenna Ciise Masiix ruuxiinna ha la jirto, oo walaalo ah. Aamiin.